iPhone တစ်လုံးကို ပြုလုပ်ဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ? • TECH CORNER
iPhone တစ်လုံးကို ပြုလုပ်ဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ?
Apple ဟာ သူ့ရဲ့ စျေးကြီးလှတဲ့ iPhone တွေကို ပြုလုပ်ဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲဆိုတာကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Apple ရဲ့ iPhone အသစ်တွေထွက်တိုင်း iFixit နဲ့ Techinsights စတဲ့ နာမည်ကြီး repair sites တွေက ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို တစ်စစီဖြုတ်ပြီး စမ်းသပ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဖြုတ်လိုက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ စျေးနှူန်းတွေကို တွက်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ …
iPhone 11 Pro Max teardown (Photo from slashgear)
-Techinsights နဲ့ NBC News ရဲ့အဆိုအရ iPhone 11 Pro Max ရဲ့ screen ဟာ 66.50$ ပဲကုန်ကျပါတယ်တဲ့။
-(ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မှန်ကွဲလို့ ပြန်လဲတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ကုန်ကျမယ်လို့ သင်ထင်ပါသလဲ?)
-11 Pro Max မှာ ပါဝင်တဲ့ Samsung ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ Battery ဟာ 10.50$ သာကုန်ကျပါတယ်။
-အနောက်ဘက် Triple Camera ကတော့ $73.50 တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
-processor, modem, memory နဲ့ circuit boards တွေအားလုံးပေါင်းကတော့ $159 ကုန်ကျပါတယ်။
-sensors, wires, PCBs စတဲ့ ကျန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးစုစုပေါင်းကတော့ 181$ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ဆိုတော့ iPhone 11 Pro Max ရဲ့ ဖုန်းတစ်ခုလုံးအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ $490.50 သာ ကျသင့်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ iPhone 11 Pro Max ရဲ့ Start Price 1099$ ဟာ စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေထက် $600 လောက်ပိုမိုများပြားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Apple ရဲ့ iPhone တစ်လုံးတန်ဖိုးဟာ ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေအပြင် သူ့ရဲ့ iOS, ထုတ်လုပ်မှူကုန်ကျစရိတ် ၊ အလုပ်သမားခ ၊ marketing မှာ သုံးတဲ့ပိုက်ဆံတွေ ၊ R&D ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေပါ ရှိပါသေးတယ်။ ဟိုးအရင်တွေက နှစ်တိုင်း အသစ်ထွက်တဲ့ Apple ရဲ့ iPhone အသစ်တွေဟာ Start Price အခုလောက်မများခဲ့ပါဘူး။ $600, 700, 800 ဝန်းကျင် စသည်ဖြင့် Start Price တွေရှိခဲ့ပြီး အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Apple ရဲ့ Flagship iPhone Start Price တွေဟာ 999$, 1099$ စသည်ဖြင့် ပိုလို့များပြားလာခဲ့ပါတယ်။
iPhone တွေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် စျေးတွေသာပိုကြီးလို့ လာခဲ့ပြီး အသစ်အသစ်တွေကရော ပိုပြီး ပါလာရဲ့လားဆိုတာ ?
ဆက်လက်ပြီး အရင်နှစ်တွေက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ iPhone တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို ‌‌ ‌ကြည့်လိုက်ရအောင် …
iPhone6teardown (photo from iFixit)
-iPhone XsMax 256GB ရဲ့ ပစ္စည်းတန်ဖိုးဟာ $443 ရှိပါတယ်။ Xs Max ရဲ့ စျေးနှူန်းကတော့ $1250 ဖြစ်တဲ့အတွက် $807 ပိုမိုများပြားပါတယ်။ XsMax 256GB ဟာ ပစ္စည်းတန်ဖိုးထက် ၂ ဆ စျေးပိုကြီးပါတယ်။
–2014 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ iPhone616GB ရဲ့ ပစ္စည်းတန်ဖိူးဟာ $200.10 ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့အချိန်က iPhone6 16GB တစ်လုံးရဲ့ စျေးနှူန်းဟာ $649 ရှိတဲ့အတွက် iPhone6တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ပစ္စည်းတန်ဖိုးထက် $450 ပိုမိုများပြားခဲ့ပြီး ကုန်ကျပစ္စည်းတန်ဖိုးထက် ၃ ဆ လောက်ပိုပြီး စျေးကြီးခဲ့တာပါ။
အခုနောက်ဆုံးထွက် 11 Pro Max မှာတော့ ပစ္စည်းကုန်ကျငွေရဲ့ ၁ ဆကျော်ကျော်လောက်ပဲ အမြတ်ယူထားတဲ့အတွက် အတိတ်က Apple နဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် ခုနောက်ပိုင်းမှာ Apple ဟာ အမြတ်တွေ လျှော့ယူလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဆိုတော့ အနာဂတ်မှာလဲ Apple ရဲ့ iPhone တွေအပေါ် အမြတ်ယူမှူဟာ ပစ္စည်းကုန်ကျငွေရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ပဲ ရှိပြီး စျေးတွေလျော့လာပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ရင်း နောက်ထပ် Article တစ်ခုကျမှ ပြန်တွေ့ပါမယ်။ xD
iPhone တစ္လုံးကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်သလဲ?
Apple ဟာ သူ႔ရဲ႕ ေစ်းႀကီးလွတဲ့ iPhone ေတြကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်သလဲဆိုတာကို ရွာေဖြတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
Apple ရဲ႕ iPhone အသစ္ေတြထြက္တိုင္း iFixit နဲ႔ Techinsights စတဲ့ နာမည္ႀကီး repair sites ေတြက ဖုန္းတစ္ခုလုံးကို တစ္စစီျဖဳတ္ၿပီး စမ္းသပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သူတို႔ျဖဳတ္လိုက္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ေစ်းႏႉန္းေတြကို တြက္ခ်က္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ …
-Techinsights နဲ႔ NBC News ရဲ႕အဆိုအရ iPhone 11 Pro Max ရဲ႕ screen ဟာ 66.50$ ပဲကုန္က်ပါတယ္တဲ့။
-(ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွန္ကြဲလို႔ ျပန္လဲတဲ့အခါ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မယ္လို႔ သင္ထင္ပါသလဲ?)
-11 Pro Max မွာ ပါဝင္တဲ့ samsung ျပဳလုပ္ေပးထားတဲ့ Battery ဟာ 10.50$ သာကုန္က်ပါတယ္။
-အေနာက္ဘက္ Triple Camera ကေတာ့ $73.50 တန္ဖိုးရွိပါတယ္။
-processor, modem, memory နဲ႔ circuit boards ေတြအားလုံးေပါင္းကေတာ့ $159 ကုန္က်ပါတယ္။
-sensors, wires, PCBs စတဲ့ က်န္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းအားလုံးစုစုေပါင္းကေတာ့ 181$ တန္ဖိုးရွိပါတယ္။
ဆိုေတာ့ iPhone 11 Pro Max ရဲ႕ ဖုန္းတစ္ခုလုံးအစိတ္အပိုင္းေတြဟာ $490.50 သာ က်သင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ iPhone 11 Pro Max ရဲ႕ Start Price 1099$ ဟာ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြထက္ $600 ေလာက္ပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Apple ရဲ႕ iPhone တစ္လုံးတန္ဖိုးဟာ ပါဝင္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြအျပင္ သူ႔ရဲ႕ iOS, ထုတ္လုပ္မႉကုန္က်စရိတ္ ၊ အလုပ္သမားခ ၊ marketing မွာ သုံးတဲ့ပိုက္ဆံေတြ ၊ R&D ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ေတြပါ ရွိပါေသးတယ္။ ဟိုးအရင္ေတြက ႏွစ္တိုင္း အသစ္ထြက္တဲ့ Apple ရဲ႕ iPhone အသစ္ေတြဟာ Start Price အခုေလာက္မမ်ားခဲ့ပါဘူး။ $600, 700, 800 ဝန္းက်င္ စသည္ျဖင့္ Start Price ေတြရွိခဲ့ၿပီး အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Apple ရဲ႕ Flagship iPhone Start Price ေတြဟာ 999$, 1099$ စသည္ျဖင့္ ပိုလို႔မ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။
iPhone ေတြဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေစ်းေတြသာပိုႀကီးလို႔ လာခဲ့ၿပီး အသစ္အသစ္ေတြကေရာ ပိုၿပီး ပါလာရဲ႕လားဆိုတာ ?
ဆက္လက္ၿပီး အရင္ႏွစ္ေတြက ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ iPhone ေတြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကို ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ …
-iPhone XsMax 256GB ရဲ႕ ပစၥည္းတန္ဖိုးဟာ $443 ရွိပါတယ္။ Xs Max ရဲ႕ ေစ်းႏႉန္းကေတာ့ $1250 ျဖစ္တဲ့အတြက္ $807 ပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္။ XsMax 256GB ဟာ ပစၥည္းတန္ဖိုးထက္ ၂ ဆ ေစ်းပိုႀကီးပါတယ္။
–2014 ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ iPhone616GB ရဲ႕ ပစၥည္းတန္ဖိူးဟာ $200.10 ပဲ ရွိပါတယ္။ အဲ့အခ်ိန္က iPhone6 16GB တစ္လုံးရဲ႕ ေစ်းႏႉန္းဟာ $649 ရွိတဲ့အတြက္ iPhone6တစ္လုံးရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ ပစၥည္းတန္ဖိုးထက္ $450 ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ၿပီး ကုန္က်ပစၥည္းတန္ဖိုးထက္ ၃ ဆ ေလာက္ပိုၿပီး ေစ်းႀကီးခဲ့တာပါ။
အခုေနာက္ဆုံးထြက္ 11 Pro Max မွာေတာ့ ပစၥည္းကုန္က်ေငြရဲ႕ ၁ ဆေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲ အျမတ္ယူထားတဲ့အတြက္ အတိတ္က Apple နဲ႔ ယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ခုေနာက္ပိုင္းမွာ Apple ဟာ အျမတ္ေတြ ေလွ်ာ့ယူလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဆိုေတာ့ အနာဂတ္မွာလဲ Apple ရဲ႕ iPhone ေတြအေပၚ အျမတ္ယူမႉဟာ ပစၥည္းကုန္က်ေငြရဲ႕ တစ္ဝက္ေလာက္ပဲ ရွိၿပီး ေစ်းေတြေလ်ာ့လာပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ရင္း ေနာက္ထပ္ Article တစ္ခုက်မွ ျပန္ေတြ႕ပါမယ္။ xD
Post Views: 1,613 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 အင်တာနက်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်‌ယောက် လုံလုံခြုံခြုံ ဆက်သွယ်ဖို့၊ ကိုယ်ပြောလိုက်တာတွေကို အခြား ဘယ်သူကမှ ကြားထဲကနေ မရယူနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့
Post Views: 546 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 Intel က သူတို့ရဲ့ 12th Gen Desktop CPU အသစ်တွေကို မနေ့က မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ Aldar